FONTCREATOR အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
dvm.dll စာကြည့်တိုက် - ဂိမ်း Riddick စီးရီးရူပဗေဒအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းရာဇဝငျခြုထမြောက်တော်မူပြီ, ရှားလော့ဟုမျး vs. ဂျက်ဟာ Ripper နှင့်အငယျဆုံးသော-လူသိများထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက်။ program ကို run, ဒါပေမဲ့တခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်မဟုတ်နိုငျသောစည်းမျဉ်းအတိုင်း, အမှားအစီရင်ခံစာများ။ အဆိုပါပြဿနာသည်ဤဂိမ်းကိုထောက်ပံ့သောက Windows ဗားရှင်းများအတွက်ပုံမှန်ပါပဲ။ ကြောင့် antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ, သုံးစွဲသူ, ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းများ၏မလျော်ကန်သောတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများလုပ်ရပ်များပျက်ကွက်။
ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ Options ကို
လုပ်ဆောင်ချက်အလွယ်ကူဆုံးသင်တန်း - registry ကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံပြန်လည် install ပြုလုပ်။ တချို့အကြောင်းပြချက်ကမဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက, သီးခြားစီတင် DLL-file ၏သက်သေနည်းလမ်းမှဖွင့်နှင့်ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အထူးအစီအစဉ်များအားဖွငျ့တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အလိုအလျှောက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော DLL files တွေကို install လုပ်ဖို့တစ်ခုမှာအစီအစဉ် DLL-Files.com လိုင်း, dvm.dll နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဘို့အများဆုံးတတ်နိုင် option တစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာကို run ။ Search bar မှာ, ဤကိစ္စတွင်ထဲမှာ, စာကြည့်တိုက်အမည်အားထည့်သွင်း, "Dvm.dll"နှင့်စာနယ်ဇင်း "ဟုအဆိုပါ DLL file ကိုရှာ".
အဆိုပါ DLL-fayl.kom client ကိုတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်ကိုတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းကလစ်နှိပ် select လုပ်ပါ။
မှန်ကန်သောနောက်တဖန် (အမည်နှင့်အမျိုးအစားစာကြည့်တိုက်ကိုသင်ပုံရိပ်မှာမြင်ရတဲ့အဘယ်အရာကိုကိုက်ညီသင့်ပါတယ်) အဲဒီ Verify နှင့်စာနယ်ဇင်း "Install".
Method ကို 2: ပြန်လည်ဂိမ်း
မကြာခဏကဥပမာအားဖြင့် Antivirus ကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်ပြုပြင်မွမ်းမံကို install, ဂိမ်းဖိုင်တွေယိုယွင်းနိုင်ဖြစ်လာတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်ကဂိမ်းဖယ်ရှားမယ် registry ကိုရှင်းလင်းပြီးထပ်မံတပ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ကညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားမည်သည့်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းအားဖြင့်ဂိမ်းဖယ်ရှားပါ။ သငျသညျရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်မူလအစကိုသုံးပါလျှင်, အဘယ်သူမျှမထိခိုက်အောက်ပါပစ္စည်းများနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း - registry ကိုသန့်ရှင်းရေး။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးမြောက်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: CCleaner ကိုသုံးပြီး registry ကိုပျော်စေ
Installer ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုအောက်ပါ, နောက်တဖန်သင့်ရဲ့ဂိမ်း Install လုပ်ပါ။
အမှားနေဆဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, Method ကိုမှ3ကိုဆက်လက်။
Method ကို 3: လက်စွဲစာအုပ်ပြင်ဆင်မှုအားစာကြည့်တိုက်
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် dvm.dll ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသင်၏ operating system ၏သင့်လျော်သောဖိုင်တွဲထဲမှာပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အများစုကတော့ကြောင့် Directory ဖြစ်ပါတယ် "System32"အဆိုပါ directory ထဲတွင်တည်ရှိပြီး "Windows ကို"ဒါပေမဲ့အမှားတစ်ခုလုပ်မရ, ပထမဦးဆုံးတပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ။
အများစုမှာဖွယ်ရှိ, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ startup အမှားပျောက်ကွယ်သွားသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်သူကမဖြစ်လျှင်, သငျသညျစနစ်အပေါ် DLL ကို register ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: FontCreator 110Getting Started (အောက်တိုဘာလ 2019).